Thatha inzuzo yeentengiso zePikolinos, tyala imali kwinduduzo | Bezzia
UMaria vazquez | 12/01/2022 18:00 | Izihlangu
Ukuthengisa lithuba elihle lokuba thenga izihlangu ezisemgangathweni. Ngokwenene ba Elona thuba lihle ukufikelela kuwo onke loo manqaku athi ngexabiso lawo lokuqala abaleke epokothweni yethu. Kwaye xa kuziwa kwifashoni, iimpahla zangaphandle kunye nezihlangu zihlala zihlala kwezo ndawo. Kungenxa yoko le nto sikholelwa ukuba uya kuthanda ukufumana iintengiso zePikolinos.
IPikolinos yinkampani yaseSpain oko kuzibophelele ekunyaniseni, umgangatho kunye nokuthuthuzela. Ifemu esiqinisekileyo ukuba phantse nonke niya kuyazi kwaye okwangoku ibonelela ngesaphulelo esifikelela kuma-30% ekuqokeleleni kwayo. Ukuncitshiswa kokuthathela ingqalelo kunikwa umgangatho kunye nokuqina kwezihlangu zakho.
Ngaphandle kwentuthuzelo kunye nokuqina kwabo, abo bethu bahlala kumantla epeninsula baqaphela iibhutsi zabo kunye neebhutsi ze-ankle njengesisombululo esihle yilwa nengqele nemvula. Kwaye hayi, ayikuko ukuthengisa, ngamava ethu lawo. Yiyo loo nto sikholelwa ukuba kunomdla ukwabelana nawe ngezona zindululo zabo zinomdla.
1 Iibhutsi zeqatha
2 Iiflethi kunye nezicathulo zezemidlalo
Los iibhutsi zeqatha ezingqukuva, Zenziwe ngesikhumba, ziba ngumhlobo olungileyo wemihla ngemihla ebusika. Ukuya eofisini, ukuya kusela ... iimodeli ze-Vícar ezinelastiki emacaleni kunye ne-Aspe ene-lace-up adjustment kunye ne-zip ecaleni. Uya kubathanda! I-padded sole sol mold ngokugqibeleleyo kwi-silhouette yonyawo kunye neyodwa yayo engatyibilikiyo inika ukubamba okufanelekileyo okufunayo ukuze uhambe ngokukhuselekileyo.
Iimodeli ezikhankanyiweyo banesaphulelo se 30% Njengomzekelo wePompeya, i-ankle boot ephezulu-heeled ifanelekile kwimbonakalo yakho eqhelekileyo eya kukumangalisa ngokuthuthuzela kwayo. Kwaye i-30% ithetha ntoni kwezi bhutsi? Ukuba ixabiso layo lehla ukusuka kwi-€ 120-140 ukuya kwi-80-97 €.
Iiflethi kunye nezicathulo zezemidlalo
Ukuba uthanda ukubeka phambili intuthuzelo yakho kunye nokubheja kwi izihlangu zemidlalo Yonke imihla, uya kufumana iindlela ezininzi zokukhetha kwiintengiso zePikolinos ukuhlaziya izihlangu zakho. Ngemigca ekhanyayo kunye neguquguqukayo, i-Cantabria okanye iimoto zezemidlalo zeSella ziba yindlela efanelekileyo. Zombini zibonisa i-ultralight chunky yodwa efanelekileyo yokuhambahamba edolophini.
Unokubheja kwakhona izihlangu zesikhumba ezikhululekile yonke imihla, intle kwaye iyaguquguquka. Ngomnyama, ikamela okanye i-burgundy kunye namakhethini aya kukuvumela ukuba ulungelelanise unyawo lwakho yonke into oyifunayo, awuyi kubasusa!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Izihlangu » Thatha inzuzo yeentengiso zePikolinos, tyala imali kwintuthuzelo